Wafdi hordhac u ah booqashada Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaarey Dhuusamareeb | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wafdi hordhac u ah booqashada Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaarey Dhuusamareeb
Wafdi hordhac u ah booqashada Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaarey Dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Wararka ka imanaya ayaa sheegaya in wafdi hordhac u ah booqasho lagu wado inuu ku tago Dhuusamareeb Ra’iisul Wasaare Kheyre inay gaareen magaalada Dhuusamareeb.
Wafdigan ayaa waxaa ay isugu jiraan shaqaale ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha iyo ilaalada gaarka u ah ra’iisul wasaaraha.
Ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan ammaank amagaalada ayaa siweyn loo adkeeyay, waxaana sugida amniga iska kaashanaya Ciidanka amniga dowladda iyo kuwa AMISOM.
Booqashada ra’iisul wasaare Kheyre uu ku tagayo Dhuusamaeeb oo aan si rasmi ah loo shaacin ayaa ku soo beegmaysa xilli weli ay socoto soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Galmudug iyo weliba qabanqaabada doorashada Madaxweynaha.
Waxaa jira weli cabasho ay muujinayaan qaar kamid ah beelaha dega Galmudug iyagoo ka cabanaya tirada xildhibaanada la siiyay Ahlu Sunna iyo weliba ururka Ahlu Sunna oo diiday in xildhibaanada la siiyay lagu xiro wax shuruudo ah